Wasiir Xoosh oo Waxba kama Jiraan ku tilmaamay in aanu wasiirada isku sharxi karin Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka – Daily Som
Wasiir Xoosh oo Waxba kama Jiraan ku tilmaamay in aanu wasiirada isku sharxi karin Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka
By Staff on April 22, 2018 No Comment
Wasiireka Dastuurka Xukuumada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jabriil Xoosh ayaa sheegay in uu is sharxi karo qof wasiir ah isla markaana aanu jirin sharci ka reebya in uu utartamo xilka Gudoomiyaha Golaha shacabka.
Wasiir Xoosh oo soo qaatay Qodobka 59 ee dastuurka ayaa sheegay in in uu qodobka uu ugal yahay Wasiirada in ay is sharaxaan, hadii ay ka mid yihiin xildhibaanaa Baarlamaanka uuna jirin shaci ka reebaya.
sidoo kjale waxa uu ku sheegay qoraalka uu soo galiyay bogiisa Facebook ga in uu Wasiirki banayno oo uu tanaasulayo marka uu xilka ku guulaysto.
Wasiir Xoosh beeninaya Hadalkii Xildhibaan shaacir ayaa yiri “Qof Wasiir ah ahna Xildhibaa waa inuu iska casilaa Wasiirnimada inta uusan u tartamin Guddoomiye-nimada Golaha Shacabka ? Maya, Qodobka”
waxa uuna sheegay in uu qabo Qodobka 59 ee dastuurka in shasi kasta oo xildhibaan uu qaban karo jaga da wasiirnimo uuna qaban karin wixi ka baxsan wasiirnimo
“59aad xarafka (c) wuxuu farayaa in shakshi xildhibaan ah uu jago dowladeed oo ka baxsan Wasiirnimo uusan qaban karin, markii uu qabtana uu jagadaas tanaasul ka yahay. Haddaba qof wasiir ah wuu tartamin karaa, isagoon is casilin, laakin maalinta Guddoomiye Golaha Shacabka uu noqdo, wasiirnimadii waa gubattaa”ayuu yiri.
Xildhibaan Cabdulaahi aadan shacir ayaa sheegay in aan araajida laga aqbali doonin Qof Wasiir ah inta uu iska casilayo xilka Wasiirnimo ee uu haayo.
Wasiir Xoosh oo Waxba kama Jiraan ku tilmaamay in aanu wasiirada isku sharxi karin Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka added by Staff on April 22, 2018